नन्द गुरुङले छोडेको समुहको नेतृत्वमा पुगे स्वतन्त्र उमेद्वार मोहन भट्ट « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » News » नन्द गुरुङले छोडेको समुहको नेतृत्वमा पुगे स्वतन्त्र उमेद्वार मोहन भट्ट
नन्द गुरुङले छोडेको समुहको नेतृत्वमा पुगे स्वतन्त्र उमेद्वार मोहन भट्ट
Nepaltube Australia Published On : 28 June, 2019
चुनाव आउनु अन्तिम समयमा नन्द गुरुङले अध्यक्षको उमेद्वारी फिर्ता लिएपछि उनको समुह अन्यौलमा परेको थियो । अध्यक्षको उमेद्वारी फिर्ता भएपछि प्राजातान्त्रिक विचारधारा बोक्ने दावी गर्ने समुहका उमेद्वारहरु प्रतिष्ठाको लडाई भन्दै चुनावमा भाग लिने तयारीमा जुटेका थिए ।
चुनावी मेलमिलापका क्रममा समुहले स्वतन्त्र रुपमा न्यु साउथ वेल्स राज्यको संयोजक तथा उपाध्यक्षको पदमा उमेद्वारी दिएका मोहनदेव भट्टलाई समेत साथमा लिन सफल भएको छ । यो समुहले स्वतन्त्र उमेद्वार भट्टसंग चुनावमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको हो ।
भट्टले यो समुहको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।
“हामी टाउको बिहिन भएका थियौ”- केन्द्रिय सचिवका उमेद्वार सरोज पाण्डेले भने -“अब हामी मोहन भट्टज्युको नेतृत्वमा झनै शसक्त भएर चुनाव लड्छौ । र यो हाम्रो प्रतिष्ठाको लडाई पनि हो ।”
न्यु साउथ वेल्स राज्यमा राम्रै पकड बनाएका भट्ट नेपाली राजनीतिक दलको प्रभावबाट गैर आवासिय नेपाली संघ मुक्त हुनुपर्छ भन्दै स्वतन्त्र उमेद्वारका रुपमा मैदानमा थिए । खासगरी एनआरएनएको मुलधारबाट टाढा रहेका ठुलो तप्काले भट्टलाई साथ दिएको छ ।
स्वतन्त्र उमेद्वार भएर पनि अन्य समुहको नेतृत्व लिन मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा मोहन भट्ट भन्छन् – “उहाँहरु कुनै राजनीतिक विचार बोक्ने प्यानल होइन रहेछ । त्यसमाथीे मैले समाजका लागि अघि सारेका एजेण्डाहरुमा उहाँहरुले सहमति जनाउनुभयो । अब समाजको हितका लागि केही गरौ भन्ने युवाहरुसंग हातेमालो गर्दा के फरक पर्छ र ? “
आफु कुनै राजनीतिक विचारधार भन्दा पनि समाजमा केही गरौ भनेर एनआरएनएमा होमिएको भट्टको भनाई थियो ।
गुरुङले छोडेको समुहमा केन्द्रिय महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र युवा संयोजक गरि २८ जना उमेद्वार छन् ।